बुढेसकालमा विबाह गरेकी चर्चित कलाकार मिथिला शर्मालाई के भयो यस्तो ? किन रुँदै हिँड्नुपर्यो ? – Gazabkonews
बुढेसकालमा विबाह गरेकी चर्चित कलाकार मिथिला शर्मालाई के भयो यस्तो ? किन रुँदै हिँड्नुपर्यो ?
गत मङ्सिरमा छायालेक तिङ्कर प्रहरी चौकी व्यासको छाङ्गरुमा झरेको थियो । तिङ्करमा बढी हिमपात हुने भएपछि सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीको टोली छाङ्गरु झरेको हो । अहिले तिङ्करमा स्थानीयवासी सरिसके तर प्रहरीमाथि उक्लिएका छैनन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्ट छाङ्गरुबाट नेपाल प्रहरी यसै साता तिङ्कर उक्लिने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ । “पहिले नै सर्नुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि तयारीमै ढिलाइ भइरहेको छ ।” प्रहरीका लागि गत कात्तिकमा खाद्यान्न ढुवानी गरिएको थियो । त्यसयता त्यो क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी भएको छैन । कात्तिकमा प्रदेश सरकारले खाद्य संस्थानको चामल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरेको हो । कात्तिकयता अहिलेसम्म सरकारले पनि खाद्यान्न ढुवानीमा चासो दिएको छैन ।
प्रहरीले तिङ्कर र छाङ्गरुको सीतापुल प्रहरीका लागि खाद्यान्न तथा थप जनशक्ति पठाउने तयारी गरेको छ । “अहिले पनि कोरोनाका कारण व्यासको छाङ्गरु र तिङ्करसम्म खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानीमै समस्या छ”, प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्ट भन्नुहुन्छ, “अहिले भइरहेको कठिनाइबारे माथिल्लो निकायमा लेखापढी गरेका छौँ, तर निक्र्यौल भएको छैन ।”नेपालतिर जान चार दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । बाटो राम्रो छैन । खाद्यान्न बोकेरै ढुवानी गर्न सकिने अवस्था नभएपछि प्रहरीलाई पठाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । छायालेकमा प्रहरी नायब निरीक्षक हर्क महताको नेतृत्वमा १५ जनाको टोली पठाउने तयारी गरिए पनि अझै सीतापुलमा इन्चार्ज कसलाई पठाउने भन्ने टुङ्गिएको छैन ।